Nyi Nyi Latt: Nokia theme များ.......
Nokia serials များ အားလုံးကို ပေါင်းပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . serials များကို မခွဲတော့ပါဘူး .7ဖိုင်ခွဲပြီးတော့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . တစ်ဖိုင်ချင်းစီဒေါင်းပြီး တစ်ပိုင်းချင်စီဖြေလဲ ရပါတယ် . မပေါင်းထား ပါဘူး . ဖြေလိုက်ရင်7ဖိုင်ရပါလိမ့်မယ် .
အောက်မှာ Download လုပ်ပါ .
ဒီဇိုင်း (1) >> Download mediafire
ဒီဇိုင်း (2) >> Download mediafire
ဒီဇိုင်း (3) >> Download mediafire
ဒီဇိုင်း (4) >> Download mediafire
ဒီဇိုင်း (5) >> Download mediafire
ဒီဇိုင်း (6) >> Download mediafire